डा. गोविन्द केसीको २४ औँ दिनमा तोडियो अनसन
सिहलिला समाचार काठमाडौँ, १८ माघ
अनसनरत डा. गोविन्द केसीले २४ औँ दिनमा एकतर्फी रुपमा अनसन तोडेका छन् । टिचिङ अस्पतालका कुचिकार अमृत पुजारी, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीको हातबाट जुस पिउँदै उनले अनसन तोडेका हुन्।
अनसन ताेडेपनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सुधारका लागि फरक रुपमा लडिरहने केसीको प्रतिवद्धता छ । ‘नागरिक समाजको आग्रहलाई मैले अनसन तोडेँ। तर यो ऐन स्वीकार्य छैन’, डा. केसीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आमनागरिकको हितविपरित एउटा व्यक्तिलाई मलजल गर्न लाग्नुभएको छ। एउटा व्यक्तिका लागि सम्झौता विपरित कानुन फेरबदल गरिनु धोका हो।’
साथै, चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास भइसकेको अवस्थामा अनसन जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने, विरामीले दुःख पाउने र राज्यले नसुन्ने अवस्था आएकाले अनसन तोडेको उनले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै पारित गरिएको भन्दै डा.केसीले त्यसरी पारित गरिएको ऐन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन्।
आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक नआएको र द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्ने माग गर्दै केसी पुस २५ देखि आमरण अनसन बसेका थिए।
इलामबाट सुरू भएको यो उनको १६ औँ अनसन थियो। स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि डा केसीलाई २ माघमा हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
आजै डाक्टर केसीलाई भेटेर पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । हिजो मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केसीलाई भेटेर अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
आजै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमालगायतले अनसन तोड्न केसीलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।